COVID 19 | Radio Himilo
Nin qaatay 10 tallaal oo Covid ah hal maalin gudaheed!
Ahmed Haaddi December 16, 2021
Himilo – Nin reer New Zealand ah ayaa la sheegay inuu helay 10 tallaal oo Covid-19 ah oo lagu duray hal maalin gudaheed, ka dib markii ay bixiyeen dad kale si ay u helaan tallaalka iyaga oo la matalayo. New ...
Serbia: Nin 20 sano ku nool god oo qaatay tallaalka COVID-19
Ahmed Haaddi August 15, 2021
Himilo – Panta Petrovic gu’gii 20aad ayuu ku hoos nool yahay dhagax ku taalla dusha sare buurta Stara Planina oo dhacda koonfurta Serbia. Jiridda cudurka COVID-19 wuxuu ogaaday sannadkii la soo dhaafay mar uu dukaameysi u tagay tuulada degaanka ee ...
Muslimiinta ku nool Shropshire oo lagu boorinayo inay qaataan tallaalka COVID-19
Ahmed Haaddi April 19, 2021
Himilo – Malaayiin muslimiin ah oo ku nool daafaha dunida ayaa sannadkii labaad soomaya iyadoo lala halgamayo cudurka COVID-19 oo weli laga adkaan la’ yahay. Waxa keliya ee loo helay waa tallaal dadka qaar laga yaabo inay shaki ka qabaan. ...
Ahmed Haaddi March 17, 2021
Himilo — Somaaliya waxay ku socotaa saadaal la’aan ka heysta halka uu ku dambeyn doono cadawga ilma-aragtida ah ee Covid-19 kaas oo soo ridanaya dad hor leh ayna dhimanayaan in badan oo muwaadiniin ah. Dowladda Somaaliya waxay horay u qaaday ...
Qaadasha tallaalka COVID-19 oo Soomaaliya ka billaabanaysa
Ahmed Haaddi March 16, 2021
Himilo – 15 March, 2021 diyaarad sidday tallaalka COVID-19 ayaa soo gaartay magaalada Muqdisho. Madaxda Wasaaradda caafimaadka iyo masuuliyiin kale ayaa guddoomay tallaalka. Qaadashada tallaalka ka hortagga Cudurka Karoona ayaa maanta ka billaabatay magaalada. Wasiirka caafimaadka ayaana noqotay qofkii ugu ...
Ahmed Haaddi March 14, 2021
Himilo – Covid-19 wuxuu noqday aafada qarniga 21aad ee dunida gaarsiiyay qasaaro ba’an oo ay ugu weyn tahay dhimashada in ka badan 2 milyan iyo bar, marka loo eego warbixinnada isasoo taraya ee sida maalinlaha ah looga soo weriyo Hey’dda ...
Sida uu COVID-19 u beddelay Muuqaalka Adduun-weynaha
Ahmed Haaddi March 13, 2021
Himilo – Covid-19 wuxuu galaaftay nolosha dad badan iyo xayiraad iyo cuuryaamin dhaqaale oo caalami ah. Balse sannad kaddib, waxaa la isku maandhaafsan yahay halka loo celin karo ciriga uu kasoo jeedo. Balse intaan ka hadlin dadaallada loogu jiro helidda ...
K/Kuuriya oo xaqiijisay kiisaskii ugu horreeyay ee feyruska cusub ah
Himilo – Adeegayaasha Caafimaadka dowladda Koofur Kuuriya ayaa xaqiijiyay seddaxdii kiis ee ugu horreeyay ee ah feyruska cusub. Dadka laga helay oo isku qoys ahaa ayaa waxaa todobaad kahor ay ka yimaadeen magaalada London. Sida ay sheegtay dowladuna, mudadaasi waxaa ...
Himilo – Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO, ayaa ka digeysa in cudurka Covid-19 ee gaaray dhammaan wadamada caalamka uusan noqon doonin midkii ugu danbeeyay ee wada gaara dunida. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Madaxa WHO oo fariin muuqaal ah oo ku beegay ...
Yurub oo dadkeeda nugul ka tallaaleysa Covid-19
Himilo – Dhowr dal oo reer Yurub ah ayaa billaabaya in dadkooda nugul ay ka tallaalan cudurka dilaagga ah ee Covid-19, xilli feyruska cusub ku fidayo caalamka WHO-na ay ka digeyso inuusan noqon doonin midkii ugu danbeeyay. Tallaalkii ugu horreeyay ...